Maka 1979: Qabsashadii Kacbada ee beddeshay taariikhdii Sacuudiga - BBC News Somali
Maka 1979: Qabsashadii Kacbada ee beddeshay taariikhdii Sacuudiga
27 Disembar 2019
Afartan sano ayaa laga joogaa markii wadaad iyo dadkii taabacsanaa ay la wareegeen Masjidka barakeysan ee ku yaalla magaalada Maka oo ah halka ugu barakeysan dunida sida uu Islaamku qabo. Weriyaha BBC-da Eli Melki ayaa sheegtay in qabsashada masjidka ay ruxday dunida Islaamka isla markaana ay beddeshay taariikhda Sacuudiga.
Mid ka mid ah raggii makarafoonka la wareegay ayaa meesha ka akhriyay khudbad diyaarsaneyd: "Muslimiinta halka joogtaay, waxaanu ku dhawaaqeynaa maanta imaanshaha Mahdi… oo la imaan doona caddaalad iyo sinnaan dhulka ka hirgasha kaddib markii caddaalad-darro ay dhulka harqisay.
Wadaadka, Khaled al-Yami, oo taabacsanaa Juhayman, ayaa sheegay "aragtiyo badan ayaa muujiyay imaashaha Mahdi". Boqollaal Muslimiin ah ayaa riyada ku arkay, sida uu sheegay Yami. Magaca Mahdi wuxuu ahaa Mohammed bin Abdullah al-Qahtani.
''I maqla walaalayaal! Ahmad al-Lehebi, aad sagxadda kore. Haddii aad aragto qof amarka ka hor imaanaya, toogo!''
Sida laga soo xigtay goobjooge magaciisa qariyay, Juhayman wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee Mahdi u duceeya, isla markiina dadkii kale ayaa bilaabay inay ka daba dhahaan "Ilaah baa weyn!".
Juhayman, oo ka mid ah aasaasayaasha JSM - oo ka soo jeeda Sajir, oo ku taalla Bedouin bartamaha dalkaas - ayaa dadkiisa ka hor qirtay in noloshiisii hore aysan hagaagsaneyn. Waxay isugu yimaadeen guriga mid ka mid ah dadkii taabacsanaa, isagoo uga sheekeeyay taariikhdiisa.
Usama al-Qusi, oo ahaa arday diinta barta oo ka qeyb galay kulamada kooxda, ayaa maqlay Juhayman oo sheegaya inuu ku lug lahaa "ganacsi sharci darro ah, ayna ku jirto daroogada".
Inta badan dadka yaqaannay sida ardaygii diinta baranayay Mutwali Saleh, way ka dambeeyeen: "Ma jiro qof arkay ninkan oo aan jecleysan. Wuxuu ahaa qof la yaab leh. Noloshiisa oo dhanna wuxuu siiyay Allah, maalin iyo habeen."
"Juhayman wuxuu jeclaa inuu aado meelaha miyiga ah ee ay ku nool yihiin dadka Bedouin," Nasser al-Hozeimi, oo ay isku dhow yihiin, ayaa sheegay. "Sababo la xiriira luqaddiisa carabiga oo daciif ahayd iyo isagoo lahaa lahjadda Bedouin, wuxuu ka fogaan jiray inuu u khudbeeyo dadka wax bartay isagoo ka baqayay in la ogaado."
Dhaxalsugihii xilligaas Fahd bin Abdulaziz al-Saud wuxuu ku sugnaa Tunisia oo uu ka socday shirkii Arab League halka amiir Abdullah, oo ahaa madaxii Ilaalada Qaranka - uu ku sugnaa Morocco. Waxaa arrintii looga tegay Boqor Khaled oo xanuunsanaa iyo wasiirkii difaaca amiir Sultan.
"Juhayman waxaa ka dhammaaday rasaasta iyo cuntada," ayuu yiri Nasser al-Hozeimi, oo asxaabtiisa ka mid ahaa. "Waxay isugu tageen qol yar, ciidammada ayaana bambaanooyin qiiq sii deynaya ku soo tuurayay... Sababtaas darteed ayayna isku soo dhiibeen. Juhayman wuu tegay asxaabtiisiina way ka daba baxeen."
Maj Nufai oo goobjoog ka ahaa kulankii markaas kaddib dhacan, ee u dhaxeeyay amiirrada Sacuudiga iyo Juhayman oo aan is beddelin ayaa sheegay inay sidan wax u dhaceen: "Amiir Saud al-Faisal ayaa weydiiyay: 'Sabab, Juhayman?' Wuxuu ku jawaabay: 'Waa qaddar.' 'Wax aad u baahan tahay miyaa jira?' Wuxuu yiri: 'Waxaan rabaa biyo.'"
Wareysi lala yeeshay bishii March 2018, Dahaxlsuge Mohammed Bin Salman, ayaa sheegay in kahor 1979, "Waxaan ku nooleyn nolol caadi ah sida dalalka kale ee Gacanka, haweenka ayaa kaxayn jiray gawaarida, waxaa Sacuudiga ku yaalla tiyaatarro aflaanta laga daawado."